Tsy misy tanàna ho an’ny Aborigènes · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2008 13:30 GMT
Banai sy ny vadiny eo anoloan'ny tranon'izy ireo
Ny adihevitra ho an'izay ho filoham-pirenena voalohany nokarakarain'ny Peopo, plateforme mpampahalala vaovao avy amin'ny olon-tsotra dia natao ny 24 febroary. Roa no nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenana ary namaly ny fanontaniana 20 napetrakin'ny olon-tsotra izay mampiasa ny rohin'ampahan-tsary toy ny Youtube mba hanapariahana ny hetahetany sy ny olany.
Miteraka resabe na ny endrika na ny fomba nitondrana ity adihevitra ity, na izany aza anefa, nisy ampahany nahatsikaiky sy nifanohitra amin'ny trangan-javatra hafa niseho tao. Raha mbola variana niady hevitra ireo mpilatsaka hofidiana tao an-trano, , tany ivelany kosa, maro ireo vondron'olona izay nahitàna koa vondron'ny aborigènes miisa roa nifandahatra amin'ny mpitandro ny filaminana (police) ; rehefa niala tsiny (nibaboka) tamin'ireo aborigènes noho ny fanambaràny miaro fanavakavahana ara-poko i Ma Yin-jeou, mpilatsaka avy amin'ny KMT ary koa rehefa nilaza i Frank Chang-ting Hsieh, mpilatsaka avy amin'ny DPP fa misy rà aborigène mikoriana ao anatiny, dia nahatsiaro ho toy ny nanaovana sinto-mahery ary feno ahiahy momba ny tenany sy ny azy ireo vondron'olona aborigènes nanao fanoherana tao ivelan'ny trano.
Banai sy ny vadiny, mipetraka eo ambony faharav…na.
Ny vondrom-piaraha-monina Aborigène Sanying ao amin'ny fari-paididian'i Taipei, sahala amin'ny vondrona Aborigène Sijeou ihany koa sy ny vondrona Aborigène maro hafa mikatroka any amin'ny lafivalon'ireo tanan-dehibe samihafa ao Taiwan, dia faritra iray lavitra andriana (adino) ahitàna mponina aborigènes maro mifikitra aminy.
Na izany aza, ireo akany mamin'ireto mponina indigènes ireto dia tsy hoe lasibatry ny rivomahery (typhon) sy ny orambaratra fotsiny, fa eo koa ny bureaucrats'construction blue prints (marimarika nataon'nuy mpiasam-mpanjakana). Ny mponina tanatin'ny vondrom-piaraha-monina Aborigène Sanying no tra-pahavoazana farany tamin'ny namotehana ny trano harin'ny tànan'izy ireo raha tonga tamin'ny 21 febroary teo ny bulldozers sy ny excavateurs (fitaovana vaventy) nalefa hanatanteraka ny baikon'ny governemanta avy amin'ny faritr'I Taipei.
Lahy antitra iray mitomany eo anatin'ny” tranony”… taorian'ny fandravàna
Taipei Times nitatitra ny zava-nisy avy teny an-toerana:
Pan, nipetraka teo ambony seza bory iray manoloana ny tranony ho fanoherana ny fandravàna dia voatery nesorin'ny polisy tamin-kery. Tonga avy eo ny pelle hydraulique (fitaovana fampiasa amin'ny asa vaventy), ary tsy nisy dimy minitra akory dia rava tanteraka ny tranon'i Pan, na dia nitoloko an-dranomaso aza i Pan sy ireo zanany vavy. “Aiza no tany halehako? Tsy mba manan-jo hahazo appartement (trano ¨) iray akory aho” hoy Pan nidradradradra.
Ireo mpiblaogy sy mpampahalala vaovao malalaka dia samy teo nanatrika ny fizotr'ireto bulldozers sy grues ireto izay narovan'ny mpotandro filaminana (polisy) 70 mahery. Torrent sy ireo mpampahalala vaovao malalaka avy amin'ny Coolloud(zh) dia samy nandefa antso maika ho filàna vonjy:
Tanaty hamehana, tsy nanana fotoana nanaovana fanentanana akory ireo mpanohana ny vondron-piaraha-monin'i Sanying. Olona ampolony mahery kely avy amin'ny tanoran'i Losheng sy ny Self-Help (avelao hoe self help fa anaraka groupe angamba io e ?) avy ao Sijeou no tonga nitondra fanampiana. Na izany aza, ampolony mahery koa ireo tsy nanao sonia ” ny fisintahana ” no rava trano tanteraka sy nampitombo isa ny antontan-korontana nony tonga ny tamin'ny 5 ora hariva, rehefa nampiasa hery ny mpitandro filaminana (polisy).
Araka ny tatitra, betsaka tamin'ireo olona no tsy nahavita nanavotra ny entana tao anatin'ny tranony, efa antitra ny ankamaroany, ary dia voatery natory tonga dia amin'ny tany fotsiny izao tsy nisy fialofana, tsy misy ondana miaraka amin'ny hatsiaka mamanàla manomboka mirotsaka. Coolloud sy vondrona mpanohana hafa koa dia nangataka tamin'ny mpamaky mba hanolotra sacs de couchage sy trano lay.
Ny governemantan'ny faritry Taipei dia nanolotra tranom-panjakana ho an-na sokajin'olona voafetra tanaty rejistra sy ireo nanaiky nanao sonia ” ny fisintahana ” amin'ny fonenany. Ny tany sy ny havoana nonenan'ireto aborigŠnes ireto moa dia nalain'ny Birao mitantana ny Ala sy Taiwan Sucre Corporation. Voatery niala noho izany izy ireo, nafindra miaraka ho amin'ny toerana iray, ary dia nafoin'izy ireo ankehitriny ny hany tany kely teo ampelatanany.
Mpiblaogy maro sy mpampahalala vaovao malalaka dia namorona blaogy fanentanana mitondra ny lohateny hoe “Supporters for Sanying Aboriginal Community” (Fanohanana ny vondron'olona aborigènes ao Sanying) mba hamondronana ireo rehetra mety ho tatitra na vaovao mifandraika amin'ny zon'i Sanying taorian'iny tranga iny. Mampiasa ny fitaovan-tserasera toy ny Google Map sy sarimihetsika Youtube izy ireo amin'izany mba hampahafantarana ny mpampiasa internet hoe aiza no misy ity vondron'olona ao Sanying ity sy ny faniriana lalina ananan'ireo aborigènes ireo mba hisy sy hiaina.
Ity tatitra an-tsarimihetsika manaraka ity dia isan'ny farany tamin'ireo ampahan-tsarimihetsika novokarin'ny vondron'ireo mpamokatra ny sarimihetsika ” ny aborigènes ao an-tanàna “. Ankoatra ny resaka sarimihetsika, nanoratra momba ilay tranga somary nahatsikaiky sy toa nifanohitra tao Sanying koa izy ireo.
Betsaka tamin'ireo tanàna maoderina sy trano no naorin'ireo mpiasa aborigènes mpila ravinahitra, nefa tsy maro tamin'izy ireny no mba afaka nigoka izany fiainana lafo anaty tanàna maoderina izany. Eny anjoron-tanàna eny izy ireny no miezaka mioitra amin'ny fiainana. Amin'izao fotoana, ampiasain'ny governemanta eo an-toerana sy ireo mpanao raharaham-barotra mba haha ara-dalàna sy haha ara-drariny ny nataony ny filazàna fa ho ” fampivoarana ny tanàna ” sy ” fiarovana ny aborigènes ” no antony nanalàna azy ireo tamin'ny tanindrazany sy ireo tanàna tondroina ho niorina ampolotaona maro tsy ara-dalàna.
Ny fahitalavitra Taiwan Indigenous TV (izay tantanàn'ny tsy miankina) dia nitatitra koa ity tranga ity:
Lin A-Long, mpitondra fivavahana amin'ny toby ara-pilazantsara-fiangonana Shan Yun, nilaza fa na dia ny olon'ny Amis nifindra any amin'ilay trano nomen'ny fanjakana honenany any Long En Pu aza dia mbola betsaka no namela ny antany ao amin'ity toby ity, ary vokatry ny tsy fahampian'ny entona natao handrahoana (gaz) any Long En Pu dia misy miverina aty amin'ny tany niaviany izy ireny ao ambany tetezan'i Sanying mba hahandro sy hatory. Na eo aza anefa izany, satria atody miady amam-bato ireto olon'ny Amis ireto dia tsy mahavita na inona na inona hanakànana ny excavateurs ( mpitrandraka ?) fa dia mitazam-potsiny ny tranony vita amin'ny fanitso sy hazo fisaka, rovitina sy ongotana tsirairay ho ao anaty korontana, atrehin'ny mason'izy ireo.
Mpanao gazety iray hafa Cheng Wei Ren avy amin'ny gazety Lipao dia nanadinkadina olona vitsivitsy amin'ny mponina Amis ao Sanying taorian'ilay fandravàna:
Olon'ny Amis vitsivitsy nanodidina ny lapoaly no nilaza taminay ny vetsovetsom-pony mba hiaina. Tsotra fotsiny: tsy te-hatao zanak'Ikalahafa anatin'ireny trano mijoalajoala ireny ry zareo; te-hahita ny mpifanolo-bodirindrina aminy sy ny zavaboary isak'izay mamoha varavarana izy ireo tahaka ny andro fahiny nahafahany nifampizara firarian-tsoa sy tafatafa kely, miray amin-na voary midadasika; tsy toy ny ankehitriny, lalantsara sisa no hany zavatra hitany eo ivelan'ny varavarany.
Coolloud koa dia nanadihady mponina Amis iray, Banai,:
Nivonto ny foko naheno ny Governemanta nilaza anay ho mpanani-bohitra sy mpibodo tanim-panjakana, ka tsy maintsy noravàna ny trano. Tsaroako tsara fa efa nanao toy izao koa ny governemanta fony aho mbola zaza; Nolazain-dry zareo fa ilainy ny tany ka dia nentiny lavitra tokoa izahay. Koa satria ilain'ny governemanta ny tany, dia tsy maintsy nandeha izahay fa mbola mila miaina. Mifindra lava izahay, afindra lavitra foana izahay miala any amin'izay nisy anay, ary ankehitriny dia lazainy izahay fa nibodo tanim-panjakana. Nea iza no tena mibodo marina e? Izay tany ngazana nivantananay dia novolenay sy nomenay aina avokoa. Fa ny governemanta kosa hanorina tranobe mijoalajoala eo amin'ilay tany na hamerina azy ho tany ngazana indray miaraka aminay eo amboniny. Hatrany Taitung ka hatraty Taipei, izaho sy ny vadiko dia niasa sy nivelona tamin'izay harinay, tsy niaina ny tonga lafatra, nefa kosa niaina tamim-pahamendrehana. Raha nametraka anay tanatin'ny efitra kanton'ireny trano mijoalajoala ireny ny governemanta, dia lasa olona tsy manan-tany sy tsy manana asa fa mpangataka izahay, tsy manana ny maha izy azy.
Superbird kosa namakafaka ny fiainana atrehin'ireo Amis ao anatin'ny vondron-piaraha-monina aborigŠnes Sanying:
Ny governemantan'ny faritra dia nangataka azy ireo hitady mpiantoka rehefa vonona ny hanao sonia ila fisintahana izy ireo, izay heveriko tsy kitoatoa ihany rehefa izy samy izy ihany no mifampiantoka eo, iaraha-mahita ny fahasahiranana ara-pihariana sedrainy. Tsy misy na iray aza afaka hiantoka ka handoa ny trosa noho ny hofan-trano tsy voalohan'ny namany.
Ny marina, ny olana dia tsy ny hoe nanaraka ny lalàna sa tsia ny olom-panjakana avy ao amin'ny governamantam-paritra, fa ny tsy nahazoana an-tsaina hatrany ampiandohana ny mba hitady izay vahaolana rehetra azo ampiharina. Tsy niantso ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga, olona izay miaina any an-toerana, sy ireo vondrona ara-tsosialy (NPOs sy ny vondrona mpiahy ara-tsosialy) mba hitady izay làlana tsara hivoahana ry zareo. Tsy nojerena ihany koa ny vahaolana azo ampiharina avy hatrany, toy ny fanomezana asa azy ireo hahafahany mandoa ny hofantranony na famporisihana azy ireo handray anjara amin'ny fanarahana toro-hevitra omen'ny Sampana Fanazarana hiasa, na Sekoly ambony. Ny zavatra iray azo atao dia ny manome azy ireo trano tsy hofaina aloha, ary manery azy ireo hanome izay avy aminy hananganany fiainana vao… Ny fijery azy dia toa ny ” asa fananganana ” sy ny fitazonana izay hahatsara bika ny tanàna no tena tanjon'ny governemanta.
Lisitry ny zavatra sy fitaovana iantohan'ny vondrona mpiahy ara-tsosialy sy ireo tsara sitrapo.
Miara-miasa ireo tsara sitrapo eny anivon'ny fiaraha-monina sy ny tanaty Cyber mba hanapariaka ny antso vonjy sy ho fanampiana amin'ny fananganana indray ireo trano avy amin'ny faharavàna. Ankilany anefa, toa tsy ho azo antoka mihitsy ny raharaha hatramin'ny nahenoana ny olom-panjakana nilaza fa hiverina ry zareo hamarana ” ny asany ” 28 Feb, the Peace Memorial Day. Toy ny manompa!
Satria mafana vay tokoa ny fifidiana izay ho filoham-pirenena, toa zary adino sy tsy manana ny toerany eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao ny tantaran'i Sanying. Raha mba mieritreritra marina ny mikasika ny zon'olombelona, momba ny fampan…nana asa, trano mora vidy, sy ny soatoavina aborigènes ao Taiwan ireo olona roa nilatsaka hofidiana, dia tokony hitsidika an'i Sanying izy ireo fa tsy handany fotoana hifampiampanga amin'ny fahitalavitra fotsiny intsony.